कस्तालाई जिताउने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कस्तालाई जिताउने ?
मंसिर ५, २०७४ डा. कमल लामिछाने
संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।
दलहरू सके आपसमा एकता गर्ने वा नसके पनि कम्तीमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यस्तो धु्रवीकरणको आरम्भचाहिँ धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी अविश्वसनीय रूपले दसैं लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे । त्यसपछि गठबन्धन र तालमेलको शृङखला नै चल्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक फोरमलाई आफूमा समाहित गर्दै केही क्षेत्रका लागि अन्य मधेस केन्द्रित तथा राजावादीसँग तालमेल गरेको छ ।
चाहे कांग्रेस होस् या एमाले र माओवादी अनि मधेस केन्द्रित दलहरू नै, विगतमा चुनाव एक्लाएक्लै उठेका भए पनि यिनीहरू सत्तामा जाने र सुविधा लिने काममा पहिलेदेखि नै निकटजस्तै थिए । सधैं मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेकाहरू यसपटक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि मिल्न सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अब देशमा वामपन्थीहरूको एउटा, कांग्रेस लगायतको अर्को र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विवेकशील साझा लगायतले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाएमा त्यसले च्याउसरी उम्रिएका दलहरूको संख्या घटाउन, राज्यको आर्थिक भार कम गराउन र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
विभिन्न दललाई मिलाएर तालमेल गर्नु या एकीकृत हुनु भनेको एक अर्थमा पहिलेभन्दा अझ बलियो हुनु हो । यसर्थ सकारात्मक नियतसहित यदि दलहरूले धु्रवीकरणका टुसा अंकुराउन दिएका हुन्थे भने यो नै भ्रष्टाचारले गनाएका, विखण्डनको बीउ रोप्न उद्यत, अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य नेतृत्वमा पुर्‍याउँदै हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने र पहिचानको मर्म र भावनालाई गलत मनसायद्वारा अपव्याख्या गर्दै जातीय नारा घन्काउने अनि अवसरका लागि कहिले यता र कहिले उता गर्ने तथा गुन्डागर्दीमा संलग्न भई कुनै बेला प्रहरीको निसानामा परेकाहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा नभित्र्याउने सुन्दर अवसर बन्न सक्थ्यो । तर अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगेकाहरूले टिकट वितरण गर्ने अनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई स्वयं तिनै पूर्व प्रहरीहरूले मत मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी जनताको अपेक्षामाथि चुनाव अघि नै दलहरूले तुषारापात गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्तिको नाम लिनु असान्दर्भिक लाग्ला, तैपनि हिजो राजपामा रहेका र एमालेजनले राष्ट्रियता विरोधीको बिल्ला भिराएका हृदयेश त्रिपाठीहरू आज सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्दैमा कसरी असल अनि राष्ट्रप्रति वफादार भएका हुन् ? कि सूर्यको प्रकाशले उनीहरूमा लगाइएको दाग हटाइदिएको हो ? हिजो उनीहरू कुन आधारमा विखण्डनकारी र आज कुन आधारमा राष्ट्रवादी भएका हुन्, एमालेले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? साथै पैसा राख्ने बैंकमा बन्दुकको खोका राख्ने तथा नागरिकता विवादमा मुछिएका ल्यारक्याल लामाहरूले राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने आधार माओवादी केन्द्रले जनतासामु प्रस्ट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै बेला प्रहरीको खोजीमा रहेका दीपक मनाङे र गणेश लामाहरूलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गर्नुको भित्री आशय केवल बलियो गठबन्धन बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?
त्यसैगरी वाम गठबन्धनमा आएका बाबुराम भट्टराईहरू एक हप्ता पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुग्नुले उनीहरू सिद्धान्त, विचार र दर्शन अनि न्यूनतम मूल्य र मान्यताको सट्टा दाउपेच र जसरी भए पनि चुनावमा आफू निर्वाचित हुन यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन् कि भन्ने कतिपयको आशंकालाई निराधार भन्न गाह्रो हुन्छ । सुन्नमा आएझैं एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संसद्को १५ सिट माग गरेको नयाँ शक्तिले केवल गोरखामा आफ्नो सिट सुरक्षित गराउने सर्तमा प्रदेशको थप ३ सिटमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा संसद्को दुई तिहाइमा वामपन्थीले जित हासिल गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कांग्रेससँग तालमेल गरेका भट्टराईले आवधिक निवार्चन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेका दलहरूलाई कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियनहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भनी छिमेकीलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र हस्तक्षेपका लागि घुमाउरो रूपले आमन्त्रण गर्न खोजेको समेत देखियो । यस्ता घटनाले उनीहरूको राजनीतिक संस्कार, चरित्र अनि विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
सिद्धान्तत: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताकै सर्वोच्चता प्रधान हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा गरिबी अनि अशिक्षामा टेकेर जनताको त्यस्तो हकलाई समेत खरिद गरिँदा लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरेको छ । यसर्थ जनताले नै दलहरूको यस्तो मनपरी र मनलाग्दीलाई यसपटक विवेकशील बनेर मतदानबाटै ठेगान लगाउने बाहेक अन्य विकल्प छैनन् । चाहे जुनसुकै गठबन्धनमा लागेका हुन्, इमानमा दाग लागेका र भ्रष्टहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्तैनन् । अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर टिकट पाएका भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई जुनसुकै दलले समर्थन गरेको भए पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्नै हुँदैन । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई नाकाबन्दी गर्न उक्साएकाहरूलाई पनि यो र त्यो दल नभनी मतदानमार्फत बहिष्कृत गर्ने यो नै एउटा अवसर हुनेछ ।
कतिपयले थारु, मैथिली, भोजपुरी लगायतको सट्टा हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग उठाउने तथा अंगिकृत नेपाली नागरिकलाई राज्य सुम्पिनेगरी माग राख्नेहरूलाई संसद्मा देख्न नपरोस् भन्ने आकांक्षासमेत राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मानमा देश र जनताले कुनै कमी गर्नु हुँदैन । उनीहरूले देशलाई जति योगदान दिनसक्थे, दिइसके । यसर्थ अब धेरै बोझ उनीहरूलाई थोपरेर युवा पुस्ताले किनाराको साक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय सकिएको छ । वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको विस्तारै स्मरणशक्ति घट्दै जानु पनि हो । स्मरणशक्तिमा आउने क्षयीकरणसँगै उनीहरूले गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुनसक्छ । त्यसैले राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आरामदायी जीवन व्यतित गर्नुपर्नेहरूलाई यसपटक जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भएका भए पनि मतदान नगरेर जनताले घरैमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।
अन्त्यमा निष्ठा, त्याग, इमानदारी तथा जवाफदेहीबाट क्रमश: च्युत हुँदै गरेका यी दलहरूलाई आपसमा दाँज्दा तात्त्विक अन्तर पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूको निष्ठा यसरी स्खलित हुँदै गएको छ कि उनीहरूले आफूले केका लागि संघर्ष गरेका थिए, त्योसम्म पनि सम्झन छाडिसकेका छन् । केवल जित, पद र पैसाले उनीहरू आफ्नो इतिहास मेटाउँदै छन् । यहाँ विचारणीय के हो भने दुबै शक्ति आफैंले बनाएको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुँदै निर्वाचनमा गएका छन् । यस्तो यथार्थका बाबजुद जबर्जस्ती एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई परम्परावादी कम्युनिस्ट धारतिर धकेल्न खोज्नु गलत हो । निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने भन्दै १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएकाहरूसमेत त्यो बाटो सही रहेनछ भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई जबर्जस्ती निरंकुशतातिर धकेल्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि वैचारिक बहसलाई धमिल्याउने चेष्टाचाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन जान्छ ।
ट्विटर : @kamallamichhan
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२१
काठमाडौं — नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले झापाको चन्द्रगढीमा उपशाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यालयबाट स्थानीयस्तरमा बिमितले सेवा प्राप्त गर्ने र यसले बिमा बजारको विकासमा थप सघाउ पुग्ने दाबी कम्पनीको छ । कम्पनीले चालु आव ०७४/०७५ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल बिमा शुल्क आम्दानी करिब ३ अर्ब ८० करोड रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:१८